Indawo yokuhlala yaseSkógar-iApartment - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yaseSkógar-iApartment
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguBjörn Magnús
UBjörn Magnús yi-Superhost
Le yindlu enkulu kwaye ixhotyiswe kakuhle kakhulu, i-1240 sq. feet (115 m2), ibekwe eSkógar, South Iceland, 150 km ukusuka eReykjavík. Indawo yokupaka yasimahla, iWiFi yasimahla kunye nendawo yokungena yabucala, ilungele abantwana, indawo egqibeleleyo yeentsapho. Ibekwe kwindawo entle, kufutshane kakhulu ne-Eyjafjallajökull, ingxangxasi yaseSkógafoss kunye neKvernufoss, ingxangxasi efihliweyo. Iilwandle ezingapheliyo ezimnyama kunye neendawo ezintle zeentaba zenza ukuba ubumelwane bube mnandi kwaye bungabiyonyani. Imyuziyam yaseSkógar isecaleni kwendlu yayo enethafa
Le ndlu inamagumbi okulala ama-3, amagumbi okuhlambela ayi-2 (enye ineshawa), ikhitshi, igumbi lokuhlamba impahla elinewasha kunye nemigca yempahla kunye negumbi lokuhlala elihle. Kwaye iWiFi yasimahla. Le yindlu ebanzi kwaye igcinwe kakuhle, ixhotyiswe ngazo zonke izinto eziyimfuneko oya kuzifuna ngeentsuku ezimbalwa zokuhlala.
4.88 · Izimvo eziyi-190
ISkógar yenye yezona ndawo zintle eIceland. Ngendalo emangalisayo kunye nezinto ezininzi ezinomtsalane ezikufutshane. Ezimbalwa kuzo yiSkógafoss, Skógar Folk Museum, Eyjafjallajökull, Þórsmörk, Dyrhólaey, Reynisfjara kunye neZiqithi zaseWestman. Indlela edumileyo yeentaba, iLaugavegur, eqala eLandmannalaugar iphela apha.
Umbuki zindwendwe ngu- Björn Magnús